UKUSUSELA ekuqalisweni kwayo ngo-2014, iJW Broadcasting efumaneka kwi-intanethi iye yakhuthaza yaza yahlaziya ukholo lwabaninzi ehlabathi lonke. Ngoku ifumaneka ngeelwimi ezingaphezu kwe-90. Ngokomzekelo, ngoku ifumaneka nangesi-Ewe, isiGa, nesiTwi (njengoko kubonisiwe), ukuze kuncedwe abavakalisi abangaphezu kwe-130 000 eBenin, eCôte d’Ivoire, eGhana, naseTogo. *
UAgatha ongumfazi womveleli wesiphaluka eGhana uthi, “Kuba ngathi uYehova uthetha nam ngokwakhe xa ndimamele amalungu eQumrhu Elilawulayo nabancedisi balo. Ukuba ibingekho iJW Broadcasting, intombi elihlwempu njengam nehlala kwampela-zwe ibiya kuyifumana phi inyhweba efana nale? Isisondeza ngakumbi kubazalwana noodade abasehlabathini lonke.”
Sifumane le ngxelo evela eZambia: “Nangona behlupheka, abavakalisi kumabandla amaninzi benza konke okusemandleni ukuze bangaphoswa yile nkqubo. Ngokomzekelo, ibandla laseMisako likwiikhilomitha eziyi-30 ukusuka kweyona dolophu ikufutshane, ibe likwindawo ethanda ukuba nemifula emininzi ngexesha lemvula.” USimon, osisicaka solungiselelo esafudukela kweli bandla linendingeko uthi: “Nyanga nganye kubakho umzalwana ohamba iiyure ezimbini ngeenyawo ukuze aye kwesona sitrato sikhulu ukuze afumane into eya edolophini, apho abazalwana badawunlowuda khona le nkqubo. Enye indoda eneminyaka eyi-70 noonyana bayo ababini babengazange bakhe baya kwiintlanganiso zamaNgqina KaYehova, kodwa yothuka xa yeva ukuba kuza kudlalwa iividiyo kwezo lali zikude kangako nempucuko. Eli xhego lithi, ‘Le, yeyona ndlela yokufunda ngoThixo.’”
Enye ileta yombulelo esuka eRashiya ithi: “Sinonyaka ngoku sibukela iJW Broadcasting ibe siyithanda kakhulu. Emva nje kwenkqubo yayo yokuqala, saziva simanyene nabazalwana ehlabathini lonke! Yayimangalisa loo nto! Siyabona ukuba siyintsapho enye emanyeneyo! Savuya gqitha xa sibona abazalwana bethu abathandekayo beQumrhu Elilawulayo. Benza konke okusemandleni ukuze basinike ukutya ngexesha elifanelekileyo, ibe sonke siyababona. Sisoloko siyijonge ngamehlo abomvu inkqubo yenyanga nganye. Sinelunda nangakumbi ngoku ngokubizwa ngokuba singamaNgqina KaYehova. Siyabulela bazalwana! Sibulela uYehova noKristu ngemisebenzi yabo emihle. Iyasomeleza ize isihlaziye!”
Inkonde yaseJamani uHorst kunye nenkondekazi engumfazi wayo uHelgano, bathi: “IJW Broadcasting iyamangalisa. Iyasomeleza, ingakumbi amava abazalwana noodade abakhubazekileyo. Imizekelo yabo iyasikhuthaza ukuba simnike konke esinako uYehova nangona sinempilo enkenenkene. Xa sabona omnye umzalwana okhubazekileyo engumdala, safunda ukuba wonke umntu angamenzela okuthile uYehova. Xa sibona imizekelo enjalo, siye sifune ukumbulela uYehova size simcenge ukuba abasikelele.”
UKodi waseNgilani, uthi: “Enkosi ngomsebenzi nexesha enilichitha nisenza i-jw.org, i-JW Broadcasting, neevidiyo zikaSihle noAvela. Enkosi ngokwenza kube lula ukuqonda iBhayibhile. Ndabhaptizwa xa ndandineminyaka esibhozo. Xa ndimdala, ndiza kuncedisa kulwakhiwo lweeHolo ZoBukumkani! Ibe ndingathanda nokusebenza eBheteli. Ngoku ndineminyaka elithoba, sendizokuba mdala.”
UArabella waseNgilani oneminyaka esibhozo uthi: “Enkosi ngeevidiyo nezinto zokudlala ezifumaneka kwindawo ethi izifundo. Zindinceda ndimazi ngakumbi uYehova. Indawo ethi izifundo kwi-jw.org indinceda ndifunde ngoYehova ngoxa ndidlala. Niyakwazi ukwenza iingoma ezimnandi, ekulula ukuzikhumbula. Neevidiyo zikaSihle noAvela ziyandinceda. Enkosi kakhulu ngomsebenzi wenu.”
^ isiqe. 3 IJW Broadcasting unokuyifumana ngokuya ku-tv.jw.org/xh.